Rallye international de Madagascar : miandry ny «tribunal sportif» ny vokatra ofisialy | NewsMada
Rallye international de Madagascar : miandry ny «tribunal sportif» ny vokatra ofisialy
Voatery alefa any amin’ny «tribunal sportif national» ny famoahana ny vokatra ofisialy ny andiany faha-38, amin’ny “Rallye international de Madagascar”. Anton’izany ny tsy faneken’ny klioba sy ny ekipazy, ny valiny navoakan’ny “college des commissaries sportifs”. Araka izany, voatery naato aloha ny famoahana ny anaran’ireo efatra voalohany, amin’ny filaharana ankapobeny sy ny roa voalohany, teo amin’ny N4, tamin’iny fifaninanana iny.
Mandra-piandry izany, nitana ny laharana fahadimy i Lahatra sy i Tsangy, nitondra ny fiara Subaru, avy amin’ny klioba Asacm. 2 ora 29 mn 12, 5 s ny fe-potoany. Fahenina, i Haja Danielson sy i Alaina, avy amin’ny TMF sy Asacm, nitondra fiara Ssangyong Actyon, izay nahatontosa ny hazakazaka, tao anatin’ny 2 ora 33 mn 17, 0 s. Marihina fa fiara 13 tamin’ireo 29 nandray ny fiaingana no tonga hatramin’ny farany.
Nirina sy Christel, avy amin’ny FMMSAM, mitondra ny fiara P.206 kosa ny voalohany teo amin’ny sokajy M11, narahin’i Mandimbinarimisa sy i Christophe avy amin’ny Ama sy ny ACCT. Hariandry sy i Miangaly kosa ny teo amin’ny M12 4RM. Faharoa tamin’io sokajy io i Tahina sy i Baovola. Voalohany teo amin’ny M12 2RM, i Anjaniaina sy i Aina Princia, narahin’i Domvala sy i Lalatiana. Ho an’ny 2RM indray lasan’i Nirina sy i Christel ary i Ndrianja sy i Fanja, ho an’ny “mixte”. Lahatra sy i Tsangy ny teo amin’ny mpanamory tanora.
Hotanterahina, anio alina ao amin’ny efitrano malalakin’ny kaominina Antananarivo ao Analakely, ny fanolorana ny amboara ho an’ireo mpandresy, tamin’ity “rallye international de Madagascar”, ity.